China Cable Semi-inoitisa Nylon Tape fekitori uye vanotengesa | NYIKA DZIMWE
Mitemo yekubhadhara T / T, L / C, D / P, nezvimwe.
Nguva yekuendesa Mazuva makumi maviri
Nzvimbo yeKutangira China
Chiteshi cheKutakura Shanghai, China
Kavha Katoni kana bhokisi remuti, 50kg / kurongedza kana zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
Iyo tepi-inoitisa tepi nylon inogadzirwa neyenylon-yakavakirwa tambo dzakaputirwa pamativi ese maviri neyakaenzana-inogadzira macomputer ane yunifomu magetsi zvivakwa, zvine simba rakanaka uye semi-conductive zvivakwa.
Mukugadzirwa kwenzvimbo dzepakati uye dzakakwira magetsi tambo dzemagetsi, nekuda kwekukamisikidzwa kwemaitiro ekugadzira, pane mapoinzi asingadzivisiki anopinza kana protrusions pane yekunze nzvimbo yekondakita. Munda wemagetsi wemazano aya kana protrusions wakanyanya kwazvo izvo zvinokonzeresa kuti iwo matipi kana protrusions ajove nzvimbo yekuchaja mukati mekuputira. Iyo jekiseni nzvimbo yekuchaja inokonzeresa kukwegura kwemuti wakasungirirwa wemagetsi. Kuitira kurerutsa yemagetsi munda wevasungwa mukati tambo, kunatsiridza yemagetsi munda kushushikana kugoverwa mukati nekunze kwekudzivirira dura, uye kuwedzera simba remagetsi kwetambo, inodikanwa kuti iwedzere semi-conductive inodzivirira nhete pakati peiyo conductive musimboti uye insulating rukoko, uye pakati insulating rukoko uye simbi rukoko.
Kana zviri zve conductor kubvunda tambo dzemagetsi neyakajairwa corss-chikamu 500mm2 uye pamusoro, inofanira kunge ichiumbwa nemusanganiswa weiyo semi-inoitisa tepi uye yakadzvanywa semi-inoitisa nhete. Nekuda kwesimba rayo repamusoro uye semi-conductive hunhu, semi-inoitisa tepi yenylon inonyanya kukodzera kuputira semi-conductive inodzivirira nhete pane yakakura muchinjikwa-chikamu conductor. Iyo haingosunge chete conductor uye inodzivirira iyo hombe muchinjikwa-chikamu conductor kubva mukusunungura panguva yekugadzira, asi zvakare inoita chinhanho mukuita kwekudzivirira extrusion uye kuyambuka-kubatanidza, inodzivirira yakakwira voltage kubva mukukonzeresa iyo yekuvhara zvinhu kuti isvinire mukati mukaha wekondakita, zvichikonzera kuburitswa kwetip, uye panguva imwechete iine mhedzisiro yekugadzirisa nzvimbo yemagetsi.
Kune tambo dzemagetsi-emagetsi epakati, tepi yenyuchi inoitisa semi-inoitisa inogona kuputirwa yakakomberedza tambo yemukati sedanda remukati rekusunga tambo yemahombekombe uye kugadziridza munda wemagetsi.
Iyo tepi-inoitisa nylon tepi yakapihwa nekambani yedu ine anotevera maitiro:
1) Iyo yepamusoro yakati sandara, isina kuunyana, notches, kupenya uye zvimwe zvikanganiso;
2) Iyo fiber yakagovaniswa zvakaenzana, iyo inodzivirira mvura yehupfu uye tepi yepasi yakasungwa zvakasungwa, pasina delamination uye kubvisa poda;
3) Yakakwira michina simba, yakapusa kuputira uye kureba kuputira kugadzira;
4) Yakasimba hygroscopicity, yakakwira yekuwedzera mwero, nekukurumidza kuwedzera mwero uye wakanaka gel kugadzikana;
5) Iko kumeso kushomeka uye vhoriyamu kudzvinyirira zvidiki, izvo zvinogona kunyatso kusimbisa simba remagetsi munda;
6) Yakanaka kupisa kuramba, yakanyanya pakarepo tembiricha kuramba, uye tambo inogona kuchengetedza kugadzikana kuita panguva pfupi yakakwira tembiricha;
7) Yakakwira makemikari kugadzikana, hapana inoparadza zvikamu, zvinopesana nemabhakitiriya uye kukukurwa kwevhu.
Iyo inokodzera kuputira uye kuchengetedza iyo semi-conductive inodzivirira nhete uye waya musimboti weiyo hombe muchinjikwa-chikamu conductor wepakati uye mukuru voltage uye Ultra-yakakwira voltage magetsi tambo.
Chezita ukobvu (mm)
×1 × 105
Yakareba term kugadzikana
Nguva pfupi kugadzikana
Ongorora: Iyo upamhi uye kureba kweiyo semi-inoitisa nylon tepi inogona kupihwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
1) Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mune yakachena, yakachena, uye ine mweya yekuchengetera. Haifanire kuverengerwa nemidziyo inogona kutsva uye makemikari akasimba, uye haifanire kunge iri padyo nemoto.
2) Chigadzirwa chinofanira kudzivirira zuva rakananga nemvura.
3) Chigadzirwa chinofanira kuve chakaputirwa chisina kusimba, dzivisa hunyoro, uye dzivisa kusvibiswa;
4) Chigadzirwa chinofanira kuchengetedzwa kubva pakumanikidzwa, kurohwa uye zvimwe zvinokuvadza panguva yekuchengetedza nekutakura.
Pashure: Semi-inoitisa Cushion Mvura Inodzivirira Tepi
Zvadaro: Semi-inoitisa Mvura Inodzivirira Tepi
Q1: Tinogona kushanyira kambani yako?
A: tiri kutarisira kusvika kwako uye isu achakutungamirira kushanyira fekitari yedu.
Q2: Ndichikurumidza sei ini ndinowana iyo kotesheni?
A: Isu tinowanzo taura mukati memaawa makumi maviri neshanu ezvakajairwa tambo zvigadzirwa mushure mekuti tibvunze kwako. Kana iwe uchikurumidza kwazvo kuti utore mutengo, ndapota tifonere isu kana utiudze isu muemail yako kuti isu tigoona yako yekutanga kubvunza.
Q3: Ndeapi mazwi ako ekurongedza?
A: Dhiramu remiti, plywood pallet, bhokisi remapuranga, katoni ndeye sarudzo, zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana kana zvinodiwa nemutengi.
A: T / T, L / C, D / P, nezvimwe. Isu tinokuratidza iwo mafoto ezve zvigadzirwa uye mapakeji usati wabhadhara bhalanzi.
Q5: Ndeapi mazwi ako ekuendesa?
A: EXW, FOB, CFR, CIF. Unogona kusarudza iyo inova iri nyore kwazvo kana inodhura kwauri.
Q6: Zvakadii neyako nguva yekuendesa?
A: Kazhinji, zvinotora mazuva manomwe kusvika gumi nemashanu mushure mekugamuchira yako yekumberi kubhadhara. Iyo chaiyo yekuendesa nguva inoenderana nezvinhu uye huwandu hweodha yako.
Q7: Ndeipi yako yemuenzaniso mutemo?
A: Muenzaniso wekuedzwa kwako uripo, Ndokumbira utaure nekutengesa kwedu kuti ushandise iyo yemahara sampuro.
A: 1. Tinochengetedza mhando yakanaka uye yemakwikwi mutengo kuona kuti vatengi vedu vanobatsirwa.
2. Tinoremekedza mutengi wese seshamwari yedu uye nemwoyo wese tinoita bhizinesi uye tinoita hushamwari navo, zvisinei nekwavanobva.
Q9: Unopa zvese tambo zvinhu zvinoenderana netambo dzatinogadzira?
A: Hongu, tinogona. Isu tine technician pane yekugadzira tekinoroji iyo iri kuita mukuongorora tambo dhizaini kuti unyore zvese zvinhu zvaunoda.
Q10: Ndeapi mazano ako ebhizinesi?
A: Kubatanidza zviwanikwa. Kubatsira vatengi kusarudza YAKANAKA yakakodzera zvinhu, kuchengetedza mari uye kugadzirisa mhando.
Purofiti diki asi inokurumidza kutendeuka: Kubatsira tambo dzevatengi kuti dziwedzere kukwikwidza mumusika uye kukura nekukurumidza.
Zvinhu zvenaironi Tape
Semi Inotungamira Kondakita Kuparadzanisa Tepi
Semi Conductive Kuparadzanisa Tepi
Semi-Kuitisa Tepi YeCable
Semi-Inoitisa Cable Tepi
Semi-Inoitisa Mucheka Tepi
Semi-Inoitisa Isina-Yakarukwa Jira Tepi
Semi-Inoitisa Inodzivirira Mucheka
Semiconductive Nonwoven Tepi
Semi-inoitisa Cushion Mvura Inodzivirira Tepi
Semi-inoitisa Mvura Inodzivirira Tepi